Continental shelf: njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka efere tectonics tioriAnyi na-ekwu na e kere eke ah ụ n'ime ụwa dị iche iche. Nke ahụ bụ, na nyiwe kọntinent na nke oké osimiri nke bụ ntọala nke mmepe niile nke ndụ. Na Ihe eji eme ihe ọ bụ njedebe nke jikọrọ ọnụ kọntinent. Nke ahụ bụ, a na-ekwu ya na ala dum nke okpuru mmiri nke na-agbatị site n'ụsọ oké osimiri ruo mgbe ịwụ elu nke na-erughị 200 mita. Mpaghara a nwere otutu ndu anumanu na osisi, o bu ya mere o jiri nwee oke onodu aku na uba maka mpaghara.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara shelf kọntinent na mkpa ọ dị.
1 Nkọwa nke shelf kọntinent
2 Akụkụ nke shelf ụwa
2.1 Oke mpaghara
2.2 Mgbada kọntinent
3 Mkpa akụ na ụba
Nkọwa nke shelf kọntinent
Ọ bụ otu ihe na, site na geologically, ka anyị kwuo na ọ bụ otu akụkụ nke tectonic plate anyị hụrụ onwe anyị na ya. Ihe dị iche bụ na ọ bụ mmiri n'okpuru mmiri na ọnọdụ ndị a ha na-eme ka o kwe omume inwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndị dị ndụ. Ndị a dị ndụ mejupụtara ihe anyị na-akpọ ụdị dị iche iche. Mmepe nke ahịhịa na ahịhịa n'okpuru oke osimiri na-abawanye akụrụngwa dịịrị mmadụ.
N'ime ihe a niile, a na-ejikwa ịnweta na nkume eme ihe. Ya mere, na akụ na ụba, ọ ga-ekwe omume ịmara ma kọwaa ihe dị na mbara ala, na 1958 Geneva Convention mere nkọwa n'otu n'ime isiokwu ya. N'okpuru iwu, mbara ala kọntinent bụ ikpo okwu mmiri n'okpuru mmiri nke gbara ala kọntinent gburugburu na ịdị omimi nke mita 200, nke nyere mkpọda dị larịị ruru ogo obosara nke ihe dịka kilomita 90.
Mpụga elu nke ikpo okwu a kwuru ga-enwerịrị mgbanwe siri ike na mkpọda iji gosi njedebe. Na ndabere site na mgbanwe a, anyị na-ahụ ala oke osimiri nke na-enweghị otu uru akụ na ụba. Ihe anyị ga-ekwurịrị bụ na ihe ndị a emeela ka ọchịchị nwee isi ọwụwa. Akara ebe mgbanwe mgbanwe a na-akpọ mkpọda kọntinent.
Iwu nke usoro iwu gbanwere nkọwa a kpọtụrụ aha n'elu na 1982. N'ebe a ka ekwuru na shelf ala nke steeti nwere ihe ndina site na akwa na okpuru ala nke ala okpuru mmiri karịrị oke ala oke osimiri ya yana yana mgbatị eke nke ókèala ya ruo na mpụta n'ọnụ ọnụ akụkụ kọntinent ahụ, ma ọ bụ ruo ebe tere aka nke kilomita 200 site na mmalite nke oke osimiri oke osimiri.
Akụkụ nke shelf ụwa
Nkọwa ohuru ndị a nyere echiche dị mkpa nke mere na ọ nweghị mmejọ ọ bụla mgbe ị na-erigbu ihe ndị sitere n'okike ugbu a. Na ihe a niile, enwere ike kewaa kọntinent ụzọ abụọ n'ụzọ abụọ: oke ala kọntinent na mkpọda kọntinent.
Akụkụ nke mbụ a bụ nke kpuchiri ndọtị niile nke ekpuchitere n'ala kọntinent ahụ. Ọ na-tumadi ekewet akwa na okpuru mmiri nke mpaghara okpuru mmiri, mkpọda ugwu na mpaghara ịrị elu kọntinent. Kaosinadị, akụkụ a niile anaghị emetụta oke osimiri kachasị omimi karịa ebe anyị dị omimi 200. A na-akọwapụta ikpo okwu na mpaghara kachasị oke na ebe dịpụrụ adịpụ site na anya nke ahụ ọ naghị adịkarị agafe kilomita maili 350 site na mmiri.
Mpaghara dum ebe achọtara akụ na ụba maka mmegbu na akụ na ụba n'okpuru mmiri. N’ebe a, ndu mmiri di iche-iche di iche-iche, nke a mere na aputa azu ebe a. Ga n’oké osimiri iji azụ nwere oke ọnụ, anaghị arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa egwu. Ya mere, ọnụọgụ akụ na ụba nke nloghachi dị mkpa mgbe anyị na-ekwu maka uru nke ngwaahịa.
Ọ bụghị naanị na anyị na-achọta akụ bara uru dịka flora na fauna, mana anyị nwekwara ebe a hụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmanụ na gas n'ụwa niile. N'ihi ya, Ọ bụghị ihe ọhụụ ịhụ ebe ndị na-egwu mmanụ na-eme ihe ha na mpaghara nke shelf. Nsogbu dị na nke a bụ mmetụta mmịpụta mmanụ a na-ebute ndụ mmiri. E nwere ọtụtụ ụdị nke mkpọtụ sitere na ụlọ ọrụ mmanụ, mmetọ mmiri, nkewa na mmebi nke ebe obibi, na-eyi egwu. Nọmalị, ihe na-enye akụ na ụba na-ebibi okike.
Nke a na akụkụ nke kọntinent shelf Ọ bụ mpaghara mmiri n'okpuru mmiri nke dị n'etiti 200 mita miri emi na mita 4000 n'okpuru oke osimiri. Na mkpọda ahụ anyị nwere ike ịchọta mgbanwe ndị dị mkpa na usoro mmụta niile nke mbara ala na enyemaka. Kacha nkịtị ihe bụ idebe ndagwurugwu, seamounts na nnukwu canyons n'ime oké osimiri. A pụkwara ịhụ ọdịda n'ala n'akụkụ ọdịda anyanwụ ebe ọ bụ na ha malitere site na nchịkọta nke ọtụtụ sedimenti nke osimiri na-ebubata site na ala ndị kacha nso.
Anumanu na ndu osisi na mpaghara a kariri ike. Na biomass na-ebelata ebe ọ bụ na omimi nke ha na-adịghị ekwe ka anyanwụ rute ha ma ha nwere ike ịba ụba. Na mpaghara niile nke mkpọda kọntinent a bụ ala oke osimiri nke gbatịrị ruo mita 4000. N'ebe a, nkezi mkpọda na-adịkarị n'etiti ogo 5 na 7, ọ bụ ezie na n'akụkụ ụfọdụ ọ nwere ike iru ogo 25 na ọbụlagodi ogo 50.
N'ihe banyere elu ala, anyị nwere ike ịchọta ihu n'etiti 8 na 10 km ogologo na ruo 270 km.
Mkpa akụ na ụba
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na gọọmentị na-agba mgba siri ike maka ndị nwere ike iri ebe ndị a wee rite uru na akụ na ụba site na akụ ha. N'etiti otutu ahịhịa mmiri eji ihe ịchọ mma, ahịa ọgwụ, ọgwụ, wdg. Anụmanụ maka mweghachi ahụ, ịkwadebe efere, ụmụ a dọtara n'agha, tankị azụ, ụwa ịkụ azụ, wdg. Ma ikike ume dị ka mmanụ ma ọ bụ gas na-echekwa, anyị na-achọta ikpo okwu bara ọgaranya n'ụdị niile.
Dịka ị pụrụ ịhụ, oghere kọntinent ahụ dị mkpa karịa ka ọ nwere ike iyi site na aha ya yana enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe eji eme ihe